D614G ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာ ဘာလဲ။ ယခင်က ရှိခဲ့ဖူးသလား ဘယ်လောက်ပြင်းထန်သလဲ။ ဘာ့ကြောင့် ကူးစက်မှု ပိုမိုလျှင်မြန်ရသလဲ။ ရောဂါပြင်းထန်ခြင်းမရှိသည့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မူကွဲအမျိုးအစားသစ်ကို စင်္ကာပူသိပ္ပံပညာရှင်များ တွေ့ရှိ ။ – H2Oupdatenews
D614G ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာ ဘာလဲ။ ယခင်က ရှိခဲ့ဖူးသလား ဘယ်လောက်ပြင်းထန်သလဲ။ ဘာ့ကြောင့် ကူးစက်မှု ပိုမိုလျှင်မြန်ရသလဲ။ ရောဂါပြင်းထန်ခြင်းမရှိသည့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မူကွဲအမျိုးအစားသစ်ကို စင်္ကာပူသိပ္ပံပညာရှင်များ တွေ့ရှိ ။
oungmarine11@outlook.com 21/08/2020	No Comments
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားလျှက်ရှိစဉ် ကာလအတွင်းသိပ္ပံပညာရှင်များ၊ သုတေသီများနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတို့အနေဖြင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော အကြီးမားဆုံး စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်၏လက္ခဏာများနှင့်ပတ်သက်၍ ဖော်ထုတ်နိုင်သော အချက်အလက်များ အလွန်နည်းပါးခြင်းဖြစ်သည်။ COVID-19 ရောဂါကို ဖြစ်ပွားစေသော SARS-CoV-2 သည် ယခင်က မရှိခဲ့သော ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရောဂါလက္ခဏာ၊ ကုသခြင်း၊ အန္တရာယ်အချက်အလက်နှင့် အတန်းအစားအားလုံးတို့သည် အချိန် ကြာလာသည်နှင့်အမျှ သတင်းအသစ်များနှင့် ပြောင်းလဲသွားသည်။
သို့သော် ယခုအထိ ဘုံတူညီသည့် လက္ခဏာမှာ “ ဗီဇပြောင်းလဲ” ရာ၌ လျှင်မြန်၍ ပြင်းထန်နိုင်သော စွမ်းရည်ရှိခြင်းဖြစ်သည်၊ ထိုအချက်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်သုတေသနပြုသူများ၊ ကာကွယ်ဆေးရှာဖွေသူများနှင့် လက်ရှိကုသနည်းလမ်းများအပေါ် ရှုတ်ထွေးမှုများဖြစ်စေသည် ဟု Time Now News က ယမန်နေ့ ရေးသားသည်။
လွန်ခဲ့သည့် သြဂုတ်လ ၁၇ ရက် တနင်္လာနေ့တွင် မလေးရှားနိုင်ငံ၌ လက်ရှိကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ထက် ကူးစက်မှု ၁၀-ဆ ပိုမိုလျှင်မြန်သော mutated strain “ သန္ဓေထွန်း မျိုးကွဲ” ဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစားအသစ်ကို တွေ့ရှိရသည်။ Bloomberg ၏အဆိုအရ D614G ဟု ခေါ်သော အဆိုပါ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးမှ အစပြုပြု၍ နောက်ဆက်တွဲ ကူးစက်မှု ၄၅ ခုတွင် တွေ့ရှိရခြင်း ဖြစ်သည်ဆို၏။ အိန္ဒိယမှ ပြန်လည် ဝင်ရောက်လာသူ ၁-ဦးနှင့် အခြား ၃-ဦးတွင် တွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်သည်ဆို၏။
SARS-CoV-2 သည် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပေါ်စေသော ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်၏ တရားဝင်အမည်ဖြစ်သည်။ D614G သည် အဆိုပါဗိုင်းရပ်စ်၏ “ ဗီဇပြောင်း “ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့သိထားပြီးဖြစ်သော ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သည် Spike Protein (အချွန်ပုံ ပရိုတင်း ) “ စပိုက် ပရိုတင်း “များဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။ D614G ကိုယ်တိုင်၌လည်း ၎င်းစပိုက်ပရိုတင်းများ တည်ရှိနေသည်။ အမိုင်နိုအက်ဆစ်တည်နေပုံ 614 အဖြစ် သတ်မှတ်သည့်နေရာတွင် D “ အက်စ်ပါတစ်အက်ဆစ်” မှ G “ ဂလိုင်ဆင်း “ အဖြစ်သို့ “ ဗီဇပြောင်းလဲ” သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းကို D614G ဟု ခေါ်သည်။
ဗိုင်းရပ်စ်တို့၏ သဘာဝအရ လူ၏ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို မျက်လှည့်ပြနိုင်သော (အချွန်ပုံ ပရိုတင်း ) “ စပိုက် ပရိုတင်း “ နေရာတွင် ပြောင်းလဲသွားသည်ဆိုခြင်းမှာ သတင်းကောင်းတစ်ရပ် မဟုတ်ပေ။
လောလောဆယ်တွင် အဆိုပါ ဗီဇမျိုးကွဲ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို မလေးရှားနိုင်ငံတွင် တွေ့ရှိခဲ့သည်ဆိုသော်လည်း အမှန်စင်စစ် လွန်ခဲ့သည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ တရုတ်ပြည် ဝူဟန်မြို့တွင် ကူးစက်မှု့ စတင်ဖြစ်ပွားပြီး မရှေးမနှောင်းတည်းက သိရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ လက်တွေ့အားဖြင့် ကမ္ဘာအနှံ့ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏ ၉၇ ရာခိုင်နှုန်းသော နမူနာများတွင် ဗီဇကွဲများရှိနေသည်။
ဗိုင်းရပ်စ်တို့ ကွဲပြားစွာဗီဇပြောင်းလဲသွားခဲ့လျှင် အကျိုးသက်ရောက်မှု ၃- ခုရှိနိုင်သည်။ ပိုမိုကူးစက်ပျံ့နှံ့စေနိုင်ခြင်း၊ ဗိုင်းရပ်စ်၏ ပုံတူပွားများမှုကို ဟန့်တားစေနိုင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် အကျိုးသက်ရောက်မှုလုံးဝပျောက်ဆုံးသွားနိုင်ခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။
D614G ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းသည် SARS-CoV-2 ဗိုင်းရပ်စ်၏ ကူးစက်သဘာဝစွမ်းရည်ကို တိုးမြင့်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ဖလော်ရီဒါရှိ စကရစ်ပ် တက္ကသိုလ်၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းသည် လူ့ဆဲလ်များသို့ ဝင်ရောက်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူပြီး ထပ်မံပွားများစေနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ အခြားသောလေ့လာမှု့ကလည်း မူရင်းဗားရှင်းထက် ကူးစက်ရန် ပိုမိုလျှင်မြန်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်ခဲ့သည်။
သို့သော် အိန္ဒိယပညာရှင်များကမူ D614G အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲကြောင်း ယခုတွေ့ရှိသည်ဆိုခြင်းမှာ အထူးအဆန်းမဟုတ်၊ လွန်ခဲ့သည့် ဧပြီလကတည်းက တွေ့ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံအတော်များများသို့လည်း ဗားရှင်းပြောင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ရောက်ပြီးနေနှင့်ပြီးဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
ထိုစဉ်က အိန္ဒိယ၌ ပိုးတွေ့လူနာ ၁၀၀ လျှင် ၄-၅ ဦးမှာ G အုပ်စုအဖြစ် စတင်တွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း၊ ဇွန်လ ရောက်သည့်အခါ ၉၀ရာနှုန်းအထိဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း၊ မူလ ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်မှာ D အုပ်စုဖြစ်သော်လည်း ဇန်နဝါရီလ၌ ဂျာမနီသို့ ပျံ့နှံ့လာစဉ် G အုပ်စုဖြစ်နေခဲ့ကြောင်း၊ ဖေဖော်ဝါရီ- မတ်လတို့၌ အိန္ဒိယတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စွဲကပ်ကြောင်း အတည်ပြုခံရသူများမှာ ဥရောပမှ ပြန်ရောက်လာသူ G အုပ်စုဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
ဗိုင်းရပ်တို့၏ သဘာဝအရ ဗီဇပြောင်းခြင်းမှာ အန္တရာယ် ရှိ- မရှိ မသေချာသော်လည်း ယခုအတိုင်းဆိုလျှင် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်၌ ပြန့်နှံ့နေသည်မှာ လနှင့်ချီ၍ ကြာခဲ့ပြီဟု ဆိုနိုင်သည်။ကျွမ်းကျင်သူများကမူ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တွင် ဗီဇပြောင်းလဲသော်လည်း ကာကွယ်ဆေး၏ စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်နိုင်ဖွယ်မရှိဟု ငြင်းခုံလျှက်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံတကာသို့တိုင် ပျံ့နှံ့နေသော SARS-CoV-2 ဗိုင်းရပ်စ်သည် ယခုချက်ချင်း D614G အဖြစ် အမှန်တကယ် မျိုးကွဲသွားသည့်တိုင် ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးထက်ပို၍ လိုအပ်မည် မဟုတ်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
WHO ကမူ D614G အပြောင်းအလဲခြင်းဖြင့် ပိုမို ဆိုးရွားလာသည်ဟု အထောက်အထား မတွေ့ရသေးကြောင်း ပြောဆိုသည်။
ကမ္ဘာကြီးမှာလည်း ကူးစက်ကပ်ရောဂါမှ ရုန်းမထွက်နိုင်သေးပဲ လုံးချာလိုက်လျှက်ရှိစဉ် ရောဂါပြင်းထန် ခြင်းမရှိသည့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် မူကွဲအမျိုးအစားကို စင်္ကာပူသိပ္ပံပညာရှင်များ တွေ့ရှိကြောင်း Bangkok Post, Channel News Asia စသည့် နိုင်ငံတကာ မီဒီယာတို့က ယနေ့ရေးသားသည်။
အမျိုးသားကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာစင်တာ (NCID) နှင့် Duke-NUS ဆေးပညာအေဂျင်စီနှင့် သိပ္ပံတို့မှ နည်းပညာနှင့်သုတေသီများ၏ လေ့လာချက်အရ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မူကွဲ အမျိုးအစားသစ်ကို တွေ့ရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ကြီးကြီးမားမား ပယ်ဖျက်ခံထားရသည့် ဂျီနုမ်းဗီဇပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သော ဗိုင်းရပ်စ်မူကွဲသည် ကျန်းမာသော ကိုယ်ခံအား တုန့်ပြန်လာအောင် ညှစ်ထုတ်ပေးနိုင်ကြောင်း ယခု ရက်သတ္တပတ်ထုတ် Lancet “ လန်းဆက် ဆေးပညာဂျာနယ် “ က ဖော်ပြသည်ဆို၏။
လေ့လာမှုအရ အဆိုပါ SARS-CoV-2 ဗိုင်းရပ်စ်မူကွဲအသစ် ကူးစက်သဖြင့် Covid-19 ရောဂါဖြစ်ပွားလျှက်ရှိသူ လူနာများအနေဖြင့် အထူးကြပ်မတ်စောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်ခြင်း သို့မဟုတ် သွေးတွင်း အောက်ဆီဂျင် နည်းလာသည့်အခြေအနေတို့၌ ပိုမိုကောင်းမွန်သောလက်တွေ့ရလဒ်များ တွေ့ရှိရသည်ဟု ရေးသားသည်။
စင်္ကာပူသိပ္ပံပညာရှင်များ၏ ယခုတွေ့ရှိချက်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ရောဂါကာကွယ်ဆေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် Covid-19 ရောဂါကုသရာတွင် အလွန်ကြီးမားသည့် ထောက်ကူမှုတစ်ရပ်တွေ့ရှိကြောင်း သတင်းကောင်းဖြစ်သည်ဟု နိုင်ငံတကာ ဆေးပညာရှင်များက ပြောဆိုသည်။
((( Time Now News., Aug 19, 2020,” What is D614G virus or D614G strain of coronavirus? All you need to knowHealth. By: Anushree GuptaAnushree Gupta ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီလျော်အောင် ကောက်နှုတ်ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ )))
#D614Gဆိုသည်မှာ #ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မူကွဲအမျိုးအစားသစ် #စင်္ကာပူသိပ္ပံပညာရှင်များ
Previous Previous post: ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ ပိတ်မိနေခြင်းဖြင့် ဘီရွတ်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခြင်း၏ အဆိုးရွားဆုံးရလာဒ်ကို လက်ဘနွန်ရင်ဆိုင်နေရ။ နေထိုင်စရာပျက်စီးသွားပြီး အလုပ်လက်မဲ့ ငတ်မွတ်လျှက် စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းနေသူ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအား ဖြစ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး ရွှေ့ပြောင်းပေးမှသာ အသက်ကယ်ဆယ်နိုင်မည်
Next Next post: စစ်တကောင်း ယာဉ်ထိန်းရဲကင်းအား ဗုံးဖောက်ခွဲမှု အရှေ့အလယ်ပိုင်းရောက် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားက ကြိုးကိုင်ဟုဆို ။ ၎င်းတို့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်း အိုင်အက်စ်တို့က ကြေညာ၍ လက်သစ် JMB တို့ဖြစ်ကြောင်း ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် သတင်းထုတ်ပြန်။